Soo Jiido Raacayaasha, Ha Iibsan Iyaga | Martech Zone
Soo Jiido Raacayaasha, Ha Iibsan Iyaga
Monday, August 23, 2010 Axad, Oktoobar 4, 2015 Ryan smith
Ma sahlana in lagu horumariyo saldhig weyn oo raacsan Twitter. Habka ugu fudud ayaa ah inaad khiyaameyso oo aad ku khasaarto lacagtaada inaad ka iibsato kumanaan qof oo raacsan mid ka mid ah kuwan “meheradaha” internetka ee bixiya adeegyadan oo kale.
Maxaa laga kasbadaa iibsashada kuwa raacsan? Marka kawaran haddii aad haysato 15,000 oo raacsan oo aan dan ka lahayn ganacsigaaga iyo farriinta aad gudbinayso? Iibsashada kuwa raacsan si fudud uma shaqeyneyso, maxaa yeelay inaad ku yeelato taageerayaal aad u badan barta Twitter saameyn kuma yeelan doonto ganacsigaaga illaa kuwa raacsan ay ka taxadaraan waxaad tweet gareyso.
Waxaa iska leh WikiCommons
Dhammaanteen waxaan aragnay saameynta ay leedahay in aan yeelano taageerayaal aad u tiro badan barta Twitter; kaliya weydii Southwest Airlines. Sababta ay raggu jecelyihiin Kevin Smith waxay abuuri kartaa buzz aad u weyn oo ku saabsan Twitter sababtoo ah taageerayaashiisa tirada badan ayaa xiiseynaya waxa uu sheegayo.
Meheraddu waxay yeelan kartaa isla nooc soo socda, laakiin way ka dhib badan tahay oo waqti ayey qaadataa. Marka hore, waxay qaadataa nuxur. U diyaari istiraatiijiyad boggaaga, iyo waxa aad rabto inaad ku dhejiso. U dir fariimo muhiim u ah kuwa raacsan. Haddii aad tafaariiq ku jirto markaa tweet garee heshiisyada iyo rasiidhada. Tweet garee dhacdooyinka daaha gadaashiisa ee xiisaynaya dhagaystayaashaada.
Marka xigta, raac dadka ama shirkadaha la xiriira ganacsigaaga. Haddii aad leedahay naqshad jiinis naqshadeeye ah, ka dib raac naqshadeeyayaasha iyo hoggaamiyeyaasha warshadaha moodada. Dhageystayaashaada la beegsanayo waxay la socon doonaan isla bogag, waxayna kaa heli doonaan cidda aad raacayso.
Ugu dambeyn, samir. Warbaahinta bulshada waa sida kalluumeysiga. Waad ku sii tuuraysaa sedka banaanka, maalin maalmaha ka mid ah ayaad bilaabi doontaa inaad ku riixdo iyaga sidii wax waalan. Noqo mid firfircoon, dhaqso badan, caqli gal ahaana waxa ka kooban mareegtadaadu way kori doontaa.
Tags: iibsashada kuwa raacsan
Jannada Dashboardka: Xarumaha Mawduucyada iyo Xayeysiinta
Agoosto 23, 2010 saacaddu markay ahayd 6:23 PM
In kasta oo aan jeclaan lahaa inaan oggolaado, nasiib daro tiro badan ayaa xambaarsan culeys badan waxayna astaan ​​u yihiin maamulka. Waxaan kugu xujeyn lahaa inaad tijaabiso wax ka iibsashada hal shirkad, ka dibna aad ku abuurto mid kale mid dabiici ah. Waxaad ogaan doontaa in kooxda leh taageerayaasha ugu badani ay si dhakhso leh u kori doonaan. Waxaan jeclaan lahaa in arrimahu kala duwanaadaan laakiin aysan ahayn. Dadku waxay jecel yihiin inay ka mid noqdaan… tirooyinka intaa ka badanina waa kuwo soo jiidasho leh.
Agoosto 23, 2010 saacaddu markay ahayd 6:34 PM
Waxaan maqlay labadaba - noqo mid bulsheed; waa baraha bulshada oo kaliya tweet garee ganacsigaaga - ama waxaan u maleynayaa inaad lahaan karto laba koonto. Midna lama socon karo, markaa xagee ka iibsataa kuwa raacsan 🙂
Agoosto 24, 2010 saacaddu markay ahayd 10:14 PM
Haddii aad u iibsaneyso dhagaystayaasha akoon Twitter ama barxad kale, waxaa jira dariiq ka fiican oo lagu sameeyo marka loo eego macno ahaan "iibsashada kuwa raacsan" - waxaa jira xayeysiisyo badan oo xayeysiin ah oo u keeni kara heer quruxsan oo la yaab leh qalliinka lagu bartilmaameedsanayo dhagaystayaasha ay u badan tahay inay ka heli doonaan mawduucaaga mid la xiriira - iyo ku-raaxeysi-ku wajahan dabeecadda beegsiga, dib u habeynta, iwm. Waxaa intaa dheer, shabakado fara badan, waxaad ku iibsan kartaa saldhig CPA ah waxaadna bixin kartaa oo keliya marka maalgashigaagu shaqeynayo, waxaana jira faa'iido dheeraad ah saameyn ku yeelashada fikradaha iyo wacyiga iyadoo la adeegsanayo habab hal abuur leh oo loogu talagay warbaahinta hodanka ah ee bixisa macaashka si ka wanaagsan gujiska.
Fikradda oo dhan ee iibsashada kuwa raacsan twitter-ka waa wax weyn haddii aad tahay shirkad jawaab-celin toos ah oo iibisa badeecad isla markaana ciyaareysa lambarro nambar ah Fikrad xun oo shirkad kasta oo isku dayeysa inay kala soocdo oo ay ku darto qiimo astaan. Tani kama duwana iibsiga liiska emaylka, ama iibsashada liis toos ah. Wali asal ahaan wey ku dhexjirtaa buuggeyga, xitaa haddii qof ogolaado in lacag la siiyo marka lagu daro. Iibsashada kuwa raacsan ayaa meesha ka maqan - kaliya kuma xirna tirada dadka raacsan, waxay ku saabsan tahay quluubta iyo maskaxda iyo daacadnimada iyo xiriirka iyo dabcan, ku xirnaanta magacyada boorsooyinka iyo waxa ku jira.
Aug 25, 2010 at 9: 30 AM
Waan jeclahay habka xulashada ee helitaanka kuwa raacsan waxaan badanaaba ku xayeysiinnaa adeegyo bixiya tan. Ujeeddadaydu, si kasta oo aan raaxo lahayn, ayaa ah in dadku aad u hooseeyaan. Tirooyinka hoose ayaa dadka iska diida waxayna muujinayaan inaadan ahayn il awood leh. Nambarada sare waxay kuu horseedi karaan jaritaan dhaqso ah.
Si kale haddii loo dhigo, iibsashada kuwa raacsan macnaheedu maahan inaad iibsaneyso qalbiyadooda iyo maskaxdooda. Waxa aad iibsaneysaa waa tiro sare oo ku filan si kuwa qalbiyada iyo maskaxda leh ay u soo jiitaan.